Nkọwapụta sitere na MSB! A ga-ekwuputa okwu azụmahịa Subpoena na Ntuziaka sitere na e-Gọọmentị na 28 Mee | RayHaber | raillynews
HomeGeneralNkọwapụta site na MSB! A ga-ekwupụta azụmahịa azụmahịa Subpoena na Mbupu site na e-Gọọmentị na ụbọchị 28 nke ọnwa Mee
22 / 05 / 2020 General, Isi akụkọ, agbachitere, Turkey
a na-ekwuwapụta azụmahịa na nzipu sitere na msb mayista site na steeti
Enyere ozi mgbasa akụkọ banyere ihe ndị e mere, ihe ndị na-aga n'ihu na okwu banyere isi nke Ministry of National Defense, karịsịa ọgụ megide iyi ọha egwu, megide ọrịa COVID19. Ozi a kwadebere n’ụdị vidio n’ihi ntiwapụ COVID-19 kesara ozi ndị a:
IWU PITA PARA PARA
Ndi na-eyi ọha egwu PKK / YPG, bụ ndị nwara ịbubata Peace Spring District n'etiti abalị na Mee 19, bụ ndị ọchịagha ndị agha wepụtara ma kewapụ ha. Site na ihe ọhụrụ kacha ọhụrụ, 10 ndị PBI / YPG na-eyi ọha egwu kewapụrụ na Peace Spring Mpaghara n'ọnwa gara aga.
A na-eme njem nyocha, ihe nlere anya na ọrụ enyemaka / enyemaka mmadụ na-aga n'ihu maka udo na ịdị jụụ na mpaghara ahụ. N'ọnọdụ a, ebidola ịrụzigharị ọrụ maka Haseke na Allouk Water Plant, nke ndị otu ndị na-eyi ọha egwu PKK / YPG mere ka ọ bụrụ ihe na-enweghị atụ, a rụwokwa mbọ dị ukwuu iji mee ka akụrụngwa ndị ahụ maliteghachi na mmiri amalitela inye Haseke na ime obodo ya na Nọvemba 2019. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ mmiri chọrọ ọkụ eletrik n'ihi nhazigharị ụkọ na ezughi oke eletrik nke nzukọ ndị na-eyi ọha egwu nyere na ndịda nke Peace Spring Region na nchịkwa nke risttù Ndị Na-eyi ọha egwu PKK / YPG agaghị arụ ọrụ nke ọma.
Igwe ọkụ eletrik a na-egbukarị ma ọ bụ ezughị ezu gbochiri olulu mmiri ndị dị na Rasulayn na Tel-Abyad, karịsịa osisi mmiri Allouk, na-arụ ọrụ zuru oke, na-akpata nsogbu mmiri na mpaghara, ndụ na-enweghị ọkụ eletrik na mmiri n'ọnọdụ ọnọdụ oyi, nnukwu nsogbu maka ndị bi na mpaghara na O nwere nsogbu.
N'ihi oke mbọ nke ndị ọrụ anyị na kọntaktị anyị na Russian Federation, naanị megawatts iri nke megawatts 1 nke ọkụ eletrik mpaghara ahụ ka enyerela maka Eprel 2020, 70, na arụzigharị ọtụtụ ụzọ eletriki eletrik na mgbakwunye.
N'agbanyeghị agbanyeghị ọkụ eletrik na-ezughi oke ma na-egbutu oge niile n'ihi nrụgide nke òtù ndị na-eyi ọha egwu PKK / YPG, mkpa mmiri dị ọcha nke ndị bi na Wire Repair na Haseke, bụ ndị ritere uru site na ụlọ ọrụ mmiri Allouk nwere usoro ndị ọzọ, kemgbe March.
N'ihi nke a, usoro ahụ, nke chọrọ ịba uru na Covidien-19 nje na-eyi ọha egwu nzukọ PKK / ypg'n, mmiri na mpaghara Hasakah gosipụtara eziokwu nke Turkey kwuru na ọ kwụsịrị.
Ọgụ megide iyi ọha egwu na-aga n'ihu n'esepụghị aka na mwakpo wakporo ụlọ na mba ofesi. Ọnụ ọgụgụ ndị na-eyi ọha egwu kewapụrụ na mpaghara niile arụ ọrụ kemgbe 1 Jenụwarị bụ 1445.
N’ọnwa gara aga, arụrụala ọkara na arụ ọrụ abuo dị afọ abụọ n’obodo maka ebe mgbaba nke òtù ndị na-eyi ọha egwu PKK / KCK. N'ime arụmọrụ ndị na-aga n'ihu, ndị omekome 24 emebiwo ọnwa gara aga; Anti egbe egbe 2, egbe egbe ọgụ, egbe egbe 104, egbe 5, egbe 2, egbe 3, ogbunigwe 2, mgbanyụ ọgụ 26, mgboagha 46, 104 rọketi mgboagha, 3200 Kg. Ihe mgbapu C-3700; 30 Kg. ammonium nitrate jidere; 88 EYP bibiri ogbunigwe 80 nke ndị mmadụ na-egwu ala. Ebibiwo ebe 4, ebe nchekwa, ọgba na nkwakọba ihe, nke ndị na-eyi ọha egwu ji, ma mee ka ọ bụrụ ihe a na-adịghị ahụkebe.
IGBO ATLAGHACHI EGO
N'ihi usoro na arụ ọrụ a rụrụ n’agha iji luso ndị ahịa ahịa nke ndị otu na-eyi ọha egwu PKK / KCK ọgụ, sịga 110.000, sịga 72, ọgwụ ọgwụ, ọgwụ ọgwụ 98.000 na obere nwatakịrị 10 n’ime ọnwa gara aga.
Na mgbakwunye, ngụkọta nke 533 ndị tinyere aka na ụzọ ịgafe ókèala ezighi ezi na ọnwa gara aga, ndị 10.298 na-egbochi / chụghachi azụ tupu ebubata rasberi. N'ime ndị a, e jidere ndị otu DAESH 2 n'ime mmadụ asatọ, ndị otu PKK / PYD-YPG ndị otu na-eyi ọha egwu nyefere onwe ha.
NSOGBU NIILE NA LIBYA
Banyere Libya, dị ka anyị kwuru na mbụ, ebumnuche anyị bụ; N'okpuru onye ndu na ndi Libya nwere, o mere ka nkwụchi ugwu na ịdị n’otu mba kpuchie ụmụ amaala Libya niile n’enweghi ike; iji nye aka na nguzobe nke Libya, nwere onwe ya na onye ọchịchị ya. N'ebe a, ndị ọrụ agha nke ndị agha Turkey na-aga n'ihu inye nkwado maka ọzụzụ na ndụmọdụ maka UMH, onye nnọchite anya iwu nke ndị Libya nabatara site na UN, n'etiti usoro nkwekọrịta abụọ bịanyere aka na iwu U / A.
UT ANDT AND NA CGB.
Banyere ntiwapụ nke COVID-19, n'otu aka, a na-eme ọmụmụ ndị dị mkpa n'etiti oke nke ọgụ dị mma, ma n'aka nke ọzọ, atụmatụ maka usoro nhazi iwu na-aga n'ihu.
N'ọnọdụ a, e mere atụmatụ na mwepụta ahụ ga-amalite site na 31 Mee, akwụkwọ ịkpọ oku ga-amalite site na 5 June na ndị ọrụ ndị ọrụ agha ga-amalite site na 20 June. A ga-ekwuputa nsonaazụ nke nhọpụta na nhazi nke ọrụ dị n'okpuru ụgbọ mmiri na gọọmentị e-28 na Mee Mee 2020.
Ọ dị mkpa ka ndị ọrụ mmanye mezue ajụjụ "COVID-19" site na e-Gọọmentị ụbọchị anọ tupu ụbọchị izipụ, na ime ule "Kovid-19" na ụlọ ọrụ ahụike a na-eduzi ha. N'ihi ntiwapụ nke COVID-19; Iji kpochapu mmetuta ma belata kọntaktị, azụmahịa niile na ntinye akwụkwọ ga-esi na gọọmentị e-Gọọmentị mee ihe, ma ewezuga okwu ikpe dị mkpa, a gaghị arụ ọrụ agha. Citizensmụ amaala anyị ga-enwe ike ịnweta ozi zuru ezu site na akaụntụ ịntanetị anyị.
IGBO EGO FETO
Bgbakwunye FETÖ na mmekorita ya na ụlọ ọrụ ndị dị mkpa; a na-ejikwa mkpebi siri ike na-elebanye anya na ozi ọhụrụ, akwụkwọ na data. N'ihi nsonaazụ nyocha emere n'ime oke a; Kemgbe 15 Julaị 2016, a chụpụrụ ndị ọrụ 19.495 na ndị agha Turkey. Usoro ikpe na nhazi maka ndị ọrụ 4.682 na-aga n'ihu.
Ndị agha nke Turkey, nke dị njikere maka ihe ha ruru, na-egbochi ma tozuru oke iru eru; maka nchekwa na nchekwa nke obodo anyị; Okwesiri okwukwe, ndidi na ịchụ-aja, o kpebisiri ike ịrụzu ọrụ ọbụla enyere ya.
8 wagon ịzụta obi maka Bursa Tram akara ga-ọkwa ọkwa
A ga-ekwuputa akụkọ banyere ọhụụ nke Ralọ ọrụ njem n'ime June
A tọhapụrụ 8 na ọrụ TÜDEMSAŞ, a zigara ndị mmadụ 13 n'ụlọ ikpe
Zụọnụ Mechanical 2 Crash Ebubo ka ị gaa n'ụlọikpe
Ụgbọ mmiri na nchịkwa nyocha na Malatya
Ndịọrụ 3 TCDD ejiri na YHT Crash Ebugoro n'Ụlọikpe
Ndị uweojii na-ekwu banyere ebubo nke "onye na-egwu egwu Gülşah Erol"
Ọrụ 7 nke Ụzọ Awara Awara Na-enye site na e-Gọọmenti, 84,6 Million Pounds Saved
Ọwara n'okporo ụzọ ụgbọ oloko Steeti, Istanbul-Ankara High Speed ​​Railway…
Marmaray, nke ga-ebute ụgbọ elu ya n'afọ ọzọ, malitere njem site na Pendik
EKWURỊTA: 1 metrobus ụgbọ elu site na May 05.00'den kagburu!
Mpaghara Udo Ido
Ndị ọrụ agha Turkish
Mmemme Transportgbọ njem Ọhaneze na Aribọchị Arife na Ememme na Izmir
Citizensmụ amaala nwere ikike ije njem nwere ike iji ụgbọ ala na ụgbọ ala nke ha abanye. Agbanyeghị ọnụ ọgụgụ ụmụ amaala dị afọ iri isii na abụọ ma ndị ga-eso ha na-anabata, ọnụ ọgụgụ a na-arị elu 65 [More ...]
Taa na Akụkọ ihe mere eme: Mee 21, 1941 Mwepeghachi nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè Svilingrad-Uzunköprü…
Taa na akụkọ ihe mere eme: 23 May 1927 1042 bụ "State Railways and Ports ...
Gümüşhane - Bayburt Junction - Kırıklı - Kelkit State Highway Pekün Ọwara et
Taa na akụkọ ihe mere eme: 11 May 1939 State Railways Administration ...
Taa na Akụkọ ihe mere eme: 23 Mee 1927 Razọ Stategbọ okporo Ọgbọ na Ọdụ borsgbọ Mmiri Iwu Iwu Iwu 1042…